एउटा कुकुर ! जसलाई मालिकले ५० लाख डलर छाडेर गए « Sudoor Aaja
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०९:३५
एउटा कुकुर ! जसलाई मालिकले ५० लाख डलर छाडेर गए
सुदूर आज २ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०९:३५
बीबीसी । अमेरिकामा ‘लुलु’ नामको एक कुकुरलाई यसका मालिकले ५० लाख डलर छाडिदिएका छन् । यसरी अचानक ‘लखपति’ बनेको आठ वर्षीय लुलुको यतिबेला अधिक चर्चा भइरहेको छ ।
८७ वर्षीय व्यवसायी बिल डोरिसको गत वर्ष मृत्यु भएको थियो । जो अविवाहित थिए । उनले आफ्नो मृत्युपछिको ‘इच्छापत्र’मा सबै सम्पत्ति लुलुको रेखदेखका लागि भनेर एउटा ट्रस्टमा जम्मा गर्न भनेका थिए । सो ट्रस्टले लुलुको ख्याल राख्न आवश्यक रकम मासिक रूपमा प्रदान गर्नेछ ।
कामका लागि बाहिर गइरहनुपर्ने हुँदा डोरिसले आफ्नी साथी मार्था बर्टनलाई लुलुको हेरचाह गर्न छाडिदिने गरेका थिए । र, उनको मृत्युअघि पनि लुलुलाई मार्थाले नै राखिरहेकी थिइन् । उनी पनि यस खबरले आश्चर्यमा परेकी छन् । मार्थाले यसबारे आफ्नो वास्तविक धारणा व्यक्त गर्नै कठिन भइरहेको बताइन् । उनले भनेकी छन्, “डोरिसले आफ्नो कुकुरलाई अत्यन्तै माया गर्दथे । र, लुलु पनि एकदमै ज्ञानी कुकुर हो ।”
तर पनि कुकुरमा पूरै ५० लाख डलर खर्च गर्न सक्ने/नसक्ने विषयमा प्रश्न गर्दा भने उनले ठट्टा गर्दै आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताइन् । लुलुका नाममा गरिने सबै खर्च संरक्षकबाट स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, लुलुको पनि मृत्यु भएमा चाहिँ सम्पत्तिको के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
यसअघि, सन् २०१५ मा क्वीन्सस्थित एक महिलाले पनि आफ्नो सबै गरगहना, घर र सम्पत्ति मृत्युपछि आफ्ना कुकुरका नाममा छाडिदिएकी थिइन् ।
काठमाण्डाै – विश्वमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या २५ लाख नाघेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाका कारण २५ लाख
कांग्रेसप्रति जनताको आर्कषण बढ्यो : सभापति देउवा
‘ओलीले संसदमा बहुमत पुर्‍याउन नसके पद छाड्दा राम्राे हुन्छ : शेरबहादुर देउवा‘ काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री
सुदुरपश्चिमका अस्पतालमा आर्थिक अभाव छैन : मन्त्री सुवेदी
अछाम : सुदुरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्रि कृष्णराज सवेदीले सुदुरपश्चिम भरिका कुनै पनी अस्पतालमा रकमको अभाव नभएको बताएका छन् ।